Horudhac: Arsenal vs Newcastle United… (Kooxda xafidanaysa tartanka FA Cup-ka oo caawa soo dhoweynaysa Magpies) – Gool FM
Horudhac: Arsenal vs Newcastle United… (Kooxda xafidanaysa tartanka FA Cup-ka oo caawa soo dhoweynaysa Magpies)
Haaruun January 9, 2021
(London) 09 Jan 2021. Arsenal ayaa doonaysa inay iska xaadiriso booskeeda wareegga afaraad ee FA Cup marka ay garoonkeeda Emirates ku soo dhaweyso kooxda kale ee Premier League ka ciyaarta ee Newcastle United caawa oo Sabti ah.
Gunners ayaa kulanka soo gali doonta iyadoo soo gaartay saddex guulood oo xiriir ah horyaalka Premier League, laakiin Newcastle ayaan wax guul ah gaarin lixdeedii kulan ee ugu dambeeyay tartamada oo dhan, waxaana ay ku jirtaa xaalad niyad jab leh.
Saacadda ay ciyaarta billaabaneyso: 08:30 Habeennimo xilliga geeska Afrika
Tababare Mikel Arteta ayaa haysta koox buuxda oo uu ka soo xusho safkiisa, maadaama kooxda haysata FA Cup ee Arsenal ay la ciyaareyso Newcastle wareegga seddexaad.
Laacibka khadka dhexe ee Thomas Partey, kaasoo ay 45 milyan oo gini kaga soo qateen Atletico Madrid ayaa laga yaabaa inuu ciyaaro haddii uu caddeeyo taam ahaanshihiisa.
Tababaraha Newcastle ee Steve Bruce, wuxuu damacsan yahay inuu ugu yaraan isbedel ku sameeyo shaxdiisa, iyadoo kooxda ay wali dareemeyso saameynta caabuqa kaddib markii uu dhowaan ka dilaacay Korona Fayras.
Goolhaye Martin Dubravka ayaa qarka u saaran inuu ku soo bilowdo shabaqa, halka Ryan Fraser iyo Jamal Lewis ay dhaawac ku seegayaan kulankan.
Kabtan Jamaal Lascelles ayaa kaliya la siiyay layrka cagaaran inuu dib u bilaabo tababarka isbuucaan kaddib markii uu ka soo kabsaday Korona Fayras, halka Weeraryahan Alain Saint-Maximin uu ku laabtay Tyneside, laakiin wali wuxuu sugayaa in wax walba ay kala caddaadaan.
>- Kaddib markii laga badiyay saddexdii kulan ee ugu horreysay FA Cup ee ay la ciyaaraan Newcastle, Arsenal waxa ay ku guuleysatay afar ka mid ah shantii kulan ee ugu danbeeyay oo ay ka horyimaadaan Magpies tartankan oo ay ugu dambeysay guushoodii 3-0 ee ka dhacday Emirates wareegga afaraad eek al ciyaareedkii 2007-08.
>- Newcastle saddexdii kulan ee ugu dambeysay ee ay marti u ahaayeen Arsenal FA Cup-ka ayaa dhammaantood ku dhammaaday 3-0 guuldarro ah – wareeggii shanaad ee ku celiska sanadkii 1936-kii, wareeggii quarter-finalka ku celiska ahaa ee 2002 iyo wareegga afaraad ee 2008.
>- Arsenal ayaa kaliya lagu reebay wareegga saddexaad ee FA Cup mid ka mid ah 24-kii xilli ciyaareed ee ugu dambeeyay, iyadoo kulankaas ay la ciyaarayeen Nottingham Forest markii ugu dambeysay ee ay galaan tartanka iyagoo haysta (2017-18).
>- Newcastle ayaa la reebay 10 ka mid ah 11-kii kulan ee ugu dambeeyay FA Cup ee ay la ciyaartay kooxaha kale ee Premier League, marka laga reebo in ay 2-1 kaga badisay Kooxda Blackburn bishii Janaayo ee sanadkii 2012-kii.
>- Arsenal ayaa guuleysatay 14 ka mid ah 15-keedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay la ciyareen Kooxda Newcastle tartammada oo dhan.
>- Kooxda Arsenal ayaa guuleysatay lixdeedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay ciyaartay FA Cup-ka.
>- Arsenal ayaa shabaqeeda gool ka ilaashatay afarteedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay garoonkeeda ku soo dhoweysay Newcastle tartammada oo dhan.
>- Newcastle United ayaa laga dhaliyey ugu yaraan labo gool saddexdeedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay ciyaartay tartanka FA Cup-ka.
DEG DEG: Mid ka mid ah xiddigaha ugu muhiimsan Juventus oo laga helay Korona Fayras
Horudhac: Manchester United vs Watford… (Red Devils oo rajaynaysa inay waddada guusha dib ugu soo laabato kulanka caawa ka dhacaya Old Trafford)